Afhayeenkii Col. Qadaafi oo la qabtey isagoo dhar dumar xiran (DAAWO) – SBC
Afhayeenkii Col. Qadaafi oo la qabtey isagoo dhar dumar xiran (DAAWO)
Tan iyo markii uu wabiga mucaaradku uu kus oo jabey Col.Muammar Gaddafi oo wadanka Liibiya xukunkiisa hayey mudo 42 sano ah waxaa gabal sii dhacaya sii noqonaysa xukuumadii gacanta birta ah ku haysey shacabka Liibiya iyadoo xubnihii kacaankii Qadaafi maalinba mid gacanta lagu soo dhigayo.
Inkastoo jaan iyo cirib meel uu dhigay la la’yahay Col. Qadaafi hadana markii ugu dambeysay isagoo madluusan ayuu sheeganayey hogaamiyaha Liibiya, haatan oo taladu faraha ka sii baxayso oo magaaladii uu ku dhashay la isku haysto ayaa hadana jugtii ugu cusleyd waxay ku dhacdey ciidamada u dagaalamaya Col. Qadaafi saacado ka hor ka dib markii la sheegay in gacanta lagu soo dhigay afhayeenkii Col. Gadaafi Moussa Ibrahim iyadoo waliba wararku sheegayaan in la qabtey isagoo dharka dumarka xiran oo baxsanaya.
Xoogaga Qadaafi diidka ah ayaa sheegtey inay gacanta ku dhigeen Mousa Ibraahim oo caan ka noqdey saxaafada aduunka tan iyo bishii February markii ay qarxeen dagaalada Liibiya, isagoo lagu tilmaamay Maxamed Siciid Asxaafkii reer Liibiya (Afhayeenkii Sadaam ahaana wasiirkii warfaafinta Ciraaq 2003).
Mustafa bin Dardef oo ah taliyaha xoogaga mucaaradka Liibiya ee ka dagaalamaya magaalada Sirta ayaa sheegay in ay qabteen Mousa Ibraahim.
23-kii bishii August ayuu Ibraahim ka mid noqdey taageerayaashii Col. Qadaafi ee ka baxsadey magaalada caasimada ah ee Tripoli.
Maalinimadii Isniinta ayuu wakaalada wararka Reuters wuxuu siiyey wareysi uu ku sheegayo in uu ku sugan yahay magaalada Sirta isla markaana Col. Qadaafi uu ku sugan yahay wadanka gudihiisa balse wuxuu diidey in uu sheego halka uu ku sugan yahay.
Magaalada Sirte oo ka mid ah sadexda magaalo ee ku harey gacanta kooxaha taabacsan Col. Qadaafi waxaa ka socda dagaal xoogan, iyadoo sidoo kale ay ka dagaalamayaan xoogaga daacada u ah qadaafi magaalooyinka Bani Walid & Sabha.
Halkan ka daawo wararkaasi.